I-STAAD-yenza uyilo olonga iindleko olusebenzayo olulungiselelwe ukumelana noxinzelelo lolwakhiwo-West India-Geofumadas
Agasti, 2019 Zobunjineli, ezintsha, Microstation-Bentley
Ifakwe kwindawo eyintloko yeSarabhai, i-K10 Grand yindawo yokwakha iofisi echaza imigangatho emitsha yezithuba zentengiso eVadodara, eGujarat, eIndiya. Indawo ifumene ukukhula okukhawulezayo kwezakhiwo zorhwebo ngenxa yokufuphi nesikhululo seenqwelomoya sendawo kunye nesikhululo sikaloliwe. I-K10 yaqesha Abacebisi beVYOM njengomcebisi wolwakhiwo lweprojekthi kwaye yabayalela ukuba bayile isakhiwo esidibana kwaye sigqithe kwelona lindelo liphezulu lophando kwishishini laseKadodara.
Le projekthi ye-INR 1.2 yezigidigidi inesakhiwo esingaphantsi kunye nomgangatho we-12, onendawo epheleleyo yeenyawo ze-200,000. Uninzi lwezakhiwo ezikule ndawo zingumxube osetyenziswayo, kunye neendawo zeofisi ngaphezulu kwamanye amashishini. Nangona kunjalo, i-K10 yayifuna ukuzisa into entsha kuloo ndawo, ngoko i-K10 Grand iya kusetyenziselwa iiofisi kuphela. Oluqwalaselo luza kunciphisa ukuphazamiseka kobomi baseofisini kubahlali.
Yoyisa iingxaki zokuyila ukudala indawo engenamakholamu
Ukuyila le nto inomtsalane, i-VYOM idinga ukoyisa imiceli mngeni emininzi. Ngenxa yokuphakama kunye nocwangciso lwangaphakathi loyilo lwesakhiwo, bekukho iingxaki zoyilo lwesakhiwo ekufuneka umbutho sijongana naso. Iqela leprojekthi lalifuna ukwenza isakhiwo esinemitya emithathu kunye nesakhiwo esiphakathi embindini. Esi sakhiwo sibonisa ukuba imigangatho emithandathu isemazantsi siyokuncipha ngaphezulu kumgangatho imigangatho emithandathu. Ukulungelelaniswa kweekholamu kunye neendonga zokusika kwakunzima ngenxa yolu loyilo olukhethekileyo. Ukongeza, umyili kunye nonjiniyela wanyanzelisa ukuba nendawo engenamakholamu kwiholo yokungena. I-nucleus ephakathi efunekayo ukuhlalisa zonke iinkonzo zoluntu, kwaye kwakunzima ukuba noyilo olunqanda inyikima kuba imilo yesakhiwo inomtsalane ngakumbi kumandla alandelayo. Ekugqibeleni, isiseko sesakhiwo sasiyindawo yokudibanisa kunye ne-raft, ngoko ke kwakuyimfuneko ukuvavanya ngononophelo isakhiwo ngaphambi kokuakhiwa. Okwangoku kwisigaba sokwakha, kulindeleke ukuba esi sakhiwo sibe yinto ebaluleke kakhulu kule ndawo.
Izakhiwo zoqhagamshelo kuyilo loqoqosho ngakumbi
Xa uyila isakhiwo, isicwangciso sokuqala yayikukudala izakhiwo ezine ezahlukileyo: iitawuli ezintathu kunye nesakhiwo esiphakathi. Nangona kunjalo, xa i-VYOM yaqala ukuhlalutya uyilo kwi-STAAD, iqela leprojekthi laqonda ukuba esi sindululo soyilo lokuqala yayingengokoqoqosho. Endaweni yoko, iqela lisebenzise i-STAAD ukwenza uyilo olutsha nolwenzelwe ukuba lube yinzuzo ngakumbi. Iqela leprojekthi lithathe isigqibo sokudibanisa zonke izakhiwo, ukonga imali kunye nexesha. Kwakufuneka kwiqela lenze olu tshintsho ngaphambi kwenqanaba lokwakha.
Ngolu luyilo endaweni, i-VYOM igqibe ekubeni iyibeka phi iikholam zenkxaso yolwakhiwo. I-STAAD ibonise iqela leprojekthi ukuba imilo yesakhiwo ijika ngokubonakalayo ukusuka kumgangatho wesithoba ukuya phezulu, isenza ukuba ikholam eqhelekileyo ethe tye ayinakwenzeka kuba bayakuwela kwisicwangciso sokwakha. Iikholamu zesithende ngekhe zisebenze nokuba zingaphi kuba bezizoyithoba kakhulu iiplanga kwaye zonakalise nezicwangciso zeofisi. Endaweni yoko, i-VYOM yacebisa iikholam ezithe nkqo kwimigangatho yokuqala elithoba kunye neekholamu ezinamathele ukusuka kwindawo yesithoba ukuya kumgangatho weshumi elinambini. Esi sicwangciso siza kugcina ubume yoyilo lo gama nje lihlala ngaphakathi kwiimfuno zekhowudi ye-IS.
Ukuphunyezwa kweebhulethi kunye neekholamu ukulinganisa uxinzelelo
Enye into eye yanceda i-VYOM ukudala indawo eyahlukileyo kukusetyenziswa kweebhulashi zomzimba ezixineneyo. Iiglasi azikwazanga ukuba nzulu kakhulu, kuba umyili wempahla wayefuna uphahla oluphezulu olunokwenzeka. Ukongeza, icebo lalifuna ukuba i-ducts ibaleke ecaleni komthi. Ezi mitha, zidibene neekholamu kunye nodonga lokusika, zithintele ukudinwa kwisakhiwo, kuvumela iziko lobunzima kunye nokuqina kube kufutshane. I-VYOM yacwangcisa iikholamu ukuze amandla okugcina aphumle ngokupheleleyo embindini wesakhiwo. Zonke iindonga zokusika, ukuphakamisa iindonga kunye neekholamu zazihlelwe ukuze zikwazi ukumelana ne-70% yamandla alandelayo. Ukubonelela ngendawo engenayo ikholamu kwindawo yokugcina izinto, iVYOM isebenzise imiqadi kunye ne-cantilever slabs ye-20 yeenyawo kuwo wonke umgangatho wesakhiwo.
Isebenzisa i-STAAD, i-VYOM yaqonda ukuba kusekho indawo enevolthi ephezulu kwisakhiwo. Le ndawo yenzeke kumgangatho wesithoba ngenxa yokuvalwa kweekholamu zokuhlelwa. Umgangatho wesithoba uphethe umthwalo omkhulu, ke bekunyanzelekile ukuba uhlengahlengise uyilo. Nje ukuba iqela leprojekthi liqonde le meko, amalungu eqela akwazile ukushenxisa kude kwicala lesine ngentsimbi yokuqinisa kunye nentambo ezibekwe kwimigca efanayo.
Ukugcina ixesha loyilo kwindawo yokusebenza yexesha elizayo
Ngokusebenzisa i-STAAD, i-VYOM igqibe lonke uyilo lwesakhiwo ngemizobo ngenyanga. I-STAAD igcine iqela leprojekthi ixesha elininzi kulo lonke inqanaba loyilo, elivumela phantse i-70 uyilo lwentengiso kuzo zombini iindlela zoyilo noyilo lokugqibela phakathi kwenyanga. I-STAAD inciphise ixesha elifunekayo ukuyila kunye nokuhlalutya ezi zinto zintsha. Isicelo kwakhona sivumele le iterations kunye notshintsho yoyilo ukuze ihambelane nekhowudi ye-IS kwindawo ekulula ukuyisebenzisa.
Uyilo luhlangabezane nazo zonke iimfuno zomyili kunye nonjiniyela, ulwakhiwo ngoku luyaqhubeka. Isakhiwo esele silindelwe sibonakala sifana nemodeli ye-3D, kwaye iindawo zentengiso ziluncedo ngaphandle kwemiqobo. Ukubekwa embindini wedolophu, i-K10 Grand iya kuvumela abahlali ukuba babe nayo yonke into abayifunayo kufutshane, kubandakanya iindawo zokuthenga, izibhedlele, iivenkile ezinkulu kunye neeresityu. Isithuba siza kubandakanya ithambeka eluphahleni lwendlu, iindawo zenkomfa ezabiweyo, indawo yokuphumla, indawo yokuzivocavoca kunye nendawo yokudlela, eya kuyenza indawo yomsebenzi wexesha elizayo.
Iprojekthi entsha ye-K10 Grand yonyulwe njengowokugqibela kunyaka we-2018 kwiNkqubo yamaBhaso eSiseko.
Ukuthatha eli lifa kuqhubeke, kulo nyaka, le mibutho ilandelayo ifikelele kuludwe lwabantu abagqibayo kulo nyaka kwiNkqubo ye Amabhaso eZiseko zoNcedo ze2019 kwicandelo "lobuNjineli boLwakhiwo".
I-FG Consultoria Empresarial yekomkhulu le-Patrimonium entsha, eqhutywa nge-100% kuyilo lwe-BIM, Lagoa da Prata, Minas Gerais, eBrazil.
Iinkonzo zeengcebiso zeSterling zobunjineli kwi-Pvt. Ltd. yeDhirubhai Ambani iNdibano yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso, iMumbai, Maharashtra, India
I-WSP yokuhambisa uyilo olugqibeleleyo lwesiseko esingaphantsi komhlaba kwiAdmiralty Arch, eLondon, e-UK.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indlela yokuphakamisa izakhiwo ze-3D kuGoogle Earth
Post Next Azisekho iindawo ezingaboniyo ngemisebenzi kaMosesOkulandelayo »